Edward Snowden, ampamoaka 365 andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2019 7:15 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, srpski, Español, English
Mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny antoko Pirate, tao Berlin, tamin'ny 2013. Sary an'i Mike Herbst tao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
Ny Alakamisy talohan'izao no nanamarika ny tsingerintaona voalohan'ilay antontan-taratasy naborak'ilay ‘analyste’ fahiny tao amin'ny CIA Edward Snowden. Hatramin'ny 5 Jona 2013, antontan-kevitra tsy hita noanoa no navoakan'ireo mpanao gazety ho fantatry ny vahoaka, torohay momba ny governemanta amerikàna sy ny rafitra fanarahamaso faobe napetrany amin'ireo fifandraisana elektronika.
Ireto ny sasany amin'ireo ampamoaka goavana indrindra hatreto:
Ao anatin'ilay bokiny vaovao « Tsy Misy Toerana Hiafenana » nataony hiresahana ny fomba fiasa miaraka amin'i Snowden, tanisain'ilay mpanao gazety Glenn Greenwald ireo toejavatra mampiahiahy nitondràna fanavaozana nandritra ny taona. Ao anatin'ny 30 andro monja ny NSA dia efa mahangona :
angondrakitra avy aminà imailaka 97 lavitrisa, sy antso an-telefaona miisa 124 lavitrisa manerana izao tontolo izao.
500 tapitrisa amn'ireo angondrakitra avy any Alemaina, 2,3 lavitrisa avy any Brezila ary 13,5 lavitisa avy ao India.
ampahanà angondrakitra miisa 70 tapitrisa niarahany niasa tamin'i Frantsa, 60 tapitrisa niaraka tamin'i Espaina, 47 tapitrisa Italia, 1,8 tapitrisa Pays-Bas, 33 tapitrisa Norvezy ary 23 tapitrisa ho an'i Danemark.
Manakaiky ny 3 lavitisa ireo antso an-telefaona sy imailaka mandalo mivantana amin'ireo tambajoram-pifandraisandavitra amerikàna. Araka ny lazain'ny Greenwald, efa voasongony ny zavabitan'i Rosia, Meksika ary ireo firenena rehetra ao Eoropa, ary efa akaikeziny ny tarehimarika vitan'ny Sinoa.
Ny raharaha Snowden dia nahafahana ihany koa nahazo fanazavana momba ny rafitra antanan-tohatra telo misy eo amin'ny NSA sy ireo governemanta vahiny. Araka izany dia nametraka ity kisarisary manaraka ity i Greewald :
antanan-tohatra 1 : Ny “Maso Dimy” dia fifanarahana fiarahamiasa manao asa fitsikilovana iarahan'i Etazonia, ny Fanjakana Mitambatra, Kanadà, Aostralia ary i Nouvelle Zélande, ka ao anatin'izany ireo firenena ireo dia manaiky fa hiaraka hiasa amin'ny asa fitsikilovana erantany amin'ny famerana ny asa fitsikilovan-dry zareo manokana, raha tsy hoe misy fanadihadiana manokana nangatahan'ny tomponandraikitra avy amin'ny Firenena iray mpiara-miasa.
antanan-tohatra faha-2 :: Ity indray dia ahitàna ireo firenena iarahan'ny NSA miasa amina tetikasam-panarahamaso manokana, nefa sady tsy isalasalàny ihany koa ny fitsikilovany azy ireny etsy andaniny. Amin'ny ankapobeny dia hita ao daholo ny ankamaroan'ireo firenena eoropeàna, firenena aziatika vitsivitsy. Tsy hita mandray anjara ao anatin'io na iray aza ny firenena ao Amerika Latina.
antanan-tohatra faha-3: Ato ireo firenena izay tsikilovin'i Etazonia tsy tapaka, nefa tsy misy fiarahana miasa azony eritreretina. Hita ato ireo firenena vitsivitsy demaokratika toa an'i Brezila, Meksika Indonezia, Afrika Atsimo ary i Kenià
Sarintany maneho ny fitsikilovan'ny NSA erantany, “ampamoaka” nataon'i Edward Snowden. Avy amin'ny Masoivohom-Piarovana Amerikàna, nozaraina tao amin'ny Wikimedia Commons, azon'ny rehetra ampiasaina.
Ela ny ela, fantatsika ihany ny fandehan'ireto hetsika manaraka ataon'ny NSA ireto :
XKEYSCORE : Anarana miafina iantsoana ilay rindrambaiko ampiasain'ireo “analystes” ao amin'ny NSA hanaovany ny fikarohana any anatin'ireo antontana angondrakitra voaangona nandritra ireo hetsika samihafa natao. Arahan'ny XKEYSCORE maso avokoa ireo imailaka, fifampiresahana ety an-tambajotra sy ny rakitahirin'ireo fivezivezen'olona marobe manerantany. Nifampizaràna tamin'ireo sampam-pitsikilovana maro hafa ny angondrakitry ny XKEYSCORE , toy ny an'i Aostralia sy Nouvelle Zélande.
DISHFIRE : Dishfire dia orinasa iray mpanangona angondrakitra bobaka be mikendry ny SMS sy ireo rakitra hafa voatahiry anaty telefaona, toy ny “famantarana ny toerana misy ny mpiantso”, ireo mpifandray aminao, ny antsipirihany momba n karatra elektronika, ny antso tsy voarainao, ny fanairana raha mampiasa ‘roaming’ (izay milaza fa niampita sisintany ianao), ireo karatra fandraharahàna elektronika, filazana mikasika fividianana entana natao taminà karatra, fanairana momba ny zotra naleha tany am-pivahiniànana, vaovao samihafa momba izay fihaonana natrehana, sns… Lazaina fa tsy dia narahana maso loatra ny fifandraisana an-telefaona nataon'ireo amerikàna na dia tsy nahataka tsy ho ao anatin'io angondrakitra io aza. Ireo hafatra sy angondrakitra momba ireo olona tsy teratany amerikàna dia voatazona sy nanaovana fandalinana avokoa.
BULLRUN : Na atao hoe tsy rindrambaiko fitsikilovana aza, ny BULLRUN dia hetsika iray ataon'ny NSA ikendrena hanimbàna ireo fitaovana fiarovana ampiasain'ireo mpampiasa rehetra noahiahiany na tsia. Ezaka iray tsy mbola nisy toa azy no hita amin'ity BULLRUN ity, hamelezana ireo rafitra fiarovana ampiasain'ny daholobe..
EGOTISTICAL GIRAFFE: Nopetahan'ny NSA ny fitety (navigateur) TOR, fitaovana iray ahafahana mitety tranonkala amin'ny fomba tsy mitonona anarana.
MUSCULAR: Natomboka tamin'ny 2009, natsofoka ho any anatin'ireo foibe fitahirizana angondrakitra any amin'ireo orinasa goavana ny MUSCULAR, toy ny Google sy Yahoo any ivelan'i Etazonia. Valinkafatra nataon'ireto orinasa 2 ireto ny fanaovana soramiafina ho fiarovana ny fifanakalozana misy ao aminy.
BLARNEY: Rindrambaiko natao hakàna tombony amin'ireo fifanarahana fiarahamiasa amin'ireo orinasa iankinan'ny ain-dehibe ka hahafahana miditra anaty tambajotra mampiasa hoson-kazavana (fibreo optique) iraisampirenena sy ireo mpitsinjara/mpamily làlana (switches and routers) manerana ny tany. Ireo firenena lasibatry ny BLARNEY : Brezila, Frantsa, Alemaina, Israely, Japàna, Meksika, Korea Atsimo ary Venezoelà ; voakasika amin'izany ihany koa ny Fiombonambe Eoropeàna sy ny Firenena Mikambana.
CO-TRAVELER : Ao anatin'ity hetsika ity, angonin'i Etazonia daholo izay torohay rehetra afaka ahafantarana ny toerana misy ny tsirairay, miainga avy eo amin'ny toerana misy ireo tendro fampitàna telefaona, Wi-Fi ary GPS. Angonina daholo ireo rehetra ireo ary anaovana fandalinana mifanaraka amin'ny fotoana, hahafantarana amin'ny ampahany hoe iza no olona miara-dia amin'ilay kinendry.
Leo be an'ireo tarehimarika ve? Vonona ny hanova zavatra mikasika izany? Fantaro ny momba ny fanentanana iraisampirenena hanoherana ny fanarahamaso faobe tarihan'ny Electronic Frontier Fondation, Privacy International, sy andiana mampahaizana manokana erantany momba ny zon'olombelona sy ny fandrindràna ny aterineto. Soniavo ny fanangonantsoania, mikarakarà hetsika eny an-toerana, ary ianaro bebe kokoa ny mahakasika ireo fitaovana fanaovana tsindry amin'ny governemanta, mba hanajan'ireto farany sy hiarovany ny fiainana manokan'ny olona ao anatin'ny vaninandron'ny nomerika.
Tao amin'ny tranonkalan'ny Electronic Frontier Fondationno nivoaka voalohany ny dika nakàna ity lahatsoratra ity.